MODA | Article Detail | MAY: GIRL OF THE MONTH
MAY: GIRL OF THE MONTH
Naw Phaw Eh Htar | May | MODA Girl | MODA Fashion Magazine
ညအိပ်အင်္ကျီပုံစံဒီဇိုင်းတွေက ဒီနှစ်မှာ တော်တော်ခေတ်စားလာတဲ့အတွက် Monday မှာ ၀တ်ဆင်တဲ့အခါမှာတော့ ရုံးတက်ရက်ပေမယ့်လည်း ပေါ့ပါးတဲ့ အငွေ့အဓာတ်နည်းနည်းထည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမှာ သေချာပါတယ်။
နွရောသီမှာ အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင်တွေပေါ်မှာ ဖက်ရှင်နဲ့ဆို မြင်သူတိုင်းရင်ထဲအေးမြမယ့် ၀တ်ဆင်ပုံ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Wednesday ဆိုတာ Small Holiday ဆိုသလို ပေါ့ပါးတဲ့ဇာအဖြူလေးနဲ့ ဆံပင်ကိုချည်ပြီး Shopping Mall လူငယ်ဆန်ဆန် မုန့်စားထွက်လို့လည်း အဆင်ပြေတဲ့ ဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်က ဒီနှစ်အတွက်ဖြစ်တဲ့ အရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျီကိုတော့ အပြာရောင်မိုင်းမိုင်းလေးနဲ့ တွဲ၀တ်လိုက်တဲ့အခါလေး အမြင်ဆန်းပြီး လှပနေမှာ သေချာပါတယ်။
ထပ်တွန့်ဂါ၀န်အတိုလေးကို Off Shoulder လေးနဲ့ တွဲ၀တ်လိုက်တော့ မိန်းကလေးဆန်ပြီး ရည်းစားနဲ့ Date ဖို့ သင့်တော်တဲ့အပြင် ချစ်ခြင်းတွေကိုလည်း ပိုပြီးရယူနိုင်မှာပါ။
Photographed by HLAING BANYAR (25MINUTES) | Fashion editor : DONG DONG | Hair & make up : KAREN ALHA | Outfits : FASHION BUFFET
Party တွေကိုနှစ်သက်သူ Cover Song Singer လေး Hnin Phyu
သူမဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ Festival Outfit တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ အခိုက်အတန့်လေးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ Sweet December လလေးမှာတော့ အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ Cover Song လေးတွေသီဆိုလေ့ရှိတဲ့ ကျောင်းသူလေး Hnin Phyu ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Bellie Eilish ရဲ့ Bad Guy Cover သီချင်းနဲ့ လူသိများလာတဲ့ Hnin Phyu ကသီချင်းဆိုရတာကို အရမ်းဝါသနာပါသလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Party သွားရတာကိုလည်းနှစ်သက်သူပါ။ Party Girl လေး Hnin Phyu ရဲ့ Holiday Festival Outfit ရွေးချယ်မှုလေးတွေက ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်။
Q. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို Describe လုပ်ချင်လဲ။
A. Lucky ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဝါသနာလေးတွေကို လုပ်ခွင့်ရတာလည်း ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲ။
Q. ဘာလုပ်ရတာကို စိတ်အားအထက်သန်ဆုံးလဲ။
A. သီချင်းဆိုတာနဲ့ သရုပ်ဆောင်တာကို အရမ်း Passionate ဖြစ်ပါတယ်။
Q. ပိတ်ရက်တွေဆို Party သွားမှာလား။ အိမ်မှာပဲ အေးဆေး Chill မှာလား။
A. Party တွေသွားရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
Q. Christmas အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းဖြစ်လဲ။
A. Christmas ဆို ကမ်းခြေဘက်ကို သွားဖြစ်ပါတယ်။
Q. Party မှာ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့ဖူးလား။
A. ဟုတ် ရှိတယ်။ Awkward ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။
Q.အချိန်တိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်နေတဲ့ Fashion Trend ကဘာဖြစ်မလဲ။
A. Shrunken Bags
Q. Christmas Song ထဲက Cover Song ပြန်ဆိုချင်တဲ့ သီချင်းရှိလား။
A. ရှိတယ်။ Ariana Grande ရဲ့ “Santa Tell Me”
Q. New Year Resolution အနေနဲ့ ဘာတွေစဉ်းစားထားလဲ။
A. နှစ်သစ်မှာ Future အတွက် ချထားတဲ့ Plan တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ Confident တွေပိုရှိအောင် ဆံပင်လည်းအရှည်ပြန်ထားမယ်။
Q. ဘဝမှာ Admire ဖြစ်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။
A. ညီမအမေကို အရမ်းလေးစားအားကျပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက Strong ဖြစ်သလို ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ကြောင့်လည်း ညီမဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
စာဖတ်ရတာဝါသနာပါသူလေး Tinky ရဲ့ Slumber Party Look လေးများ
နိုဝင်ဘာလမှာတော့ Bride Theme နဲ့လိုက်ဖက်အောင် MODA Girl လေးကိုလည်း Slumber Party ဆန်ဆန် Pyjamas လေးတွေ၊ Night Wears လေးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Tinky ကလည်း သွက်လက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်လေးမို့ Satin Night Wear လေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်နေတာ အသေချာပါပဲ။
Q. မနက်ခင်းတစ်နေ့တာ Routine ထဲမှာ အမြဲလုပ်လေ့ရှိတာက။
A. ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးတာရယ်၊ တစ်နာရီလောက်စာအုပ်ဖတ်တာရယ်ပါ။
Q. ပိတ်ရက်တွေဆို အိမ်မှာနေရတာကြိုက်လား။ အပြင်ထွက်ရတာကြိုက်လား။
A. နှစ်ခုလုံးလုပ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ မိသားစုတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နေရတာကြိုက်သလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားရတာလည်း သဘောကျပါတယ်။
Q. ဘယ်အရာကို လုပ်ရတာ Passion ဖြစ်လဲ။
A. အသစ်အဆန်းတွေကို စူးစမ်းလေ့လာနေရတာကို Passion ဖြစ်တယ်။ ဖန်တီးရတာတွေ၊ Creativity ဖြစ်တဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း အရမ်း Passionate ဖြစ်ပါတယ်။
Q. Pyjamas လား။ Night Wear လား။
A. Comfy Pyjamas လေးတွေပါ။
Q. Role Model ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
A. Designer Donatella Versace ပါ။ သူမဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ Career Path တွေနဲ့ Life ကို Handle လုပ်ခဲ့တာတွေကို အရမ်း Inspire ဖြစ်တယ်။ သူမောင်ဆုံးပြီးသွား နောက်ပိုင်းမှာလည်း အခက်အခဲတွေကြားက သူမ လုပ်ချင်တဲ့ Design တွေကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ဆို ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိရှိ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာ သိလာတယ်။
Q. လက်ခံဖူးသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး Advice။
A. လောကမှာ ဘယ်အရာမှ ကြောက်နေစရာဆိုတာမရှိဘူး။ အရာအားလုံးကိ သိမြင်နားလည်ဖို့ပဲလိုတယ်။ တဖြည်းဖြည်းသိမြင်လာရင် အကြောက်တရားဆိုလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ - Marie Curie
Q. သမိုင်းထဲက (ဒါမှမဟုတ်) Fictional Character တွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆို ဘယ်သူဖြစ်ချင်လဲ။
A. Radioactive ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး Nobel ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင်သစ် ရူပဗေဒပညာရှင် Marie Curie ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
Q. အမြဲတမ်းဝတ်လေ့ရှိတဲ့ Fashion Style ဆိုရင် ဘယ်လို Style ဖြစ်မလဲ။
A. Chic နဲ့ Vintage ဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်တာများပါတယ်။
Edgy and Boyish Look လေးတွေနဲ့ အမြဲအထာကျနေသူ Kare
အောက်တိုဘာလမှာတော့ နည်းနည်း Urban ဆန်ပြီးHot ဖြစ်မယ့် Theme နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ကောင်မလေးကို တော်တော်ရှာယူလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အနုပညာလုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းလုပ်လာတာတွေ့ရတဲ့ Kare လို့ခေါ်ကြတဲ့ Yin Wai Aung ကို October Issue ရဲ MODA Girl လေးအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေးမို့ Night Life Photoshoot လေးတွေကိုလည်း နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမလုပ်မဖြစ်လုပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဆို ဘာဖြစ်မလဲ။
ဗညျါ် အိပ်ရာကနေထဖို့ တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားယူရတာကတော့ မနက်မိုးလင်းရင် မလုပ်မဖြစ်အရာတခုပါပ။ဲ
အိတ်ထဲမှာ မပါမဖြစ် ပစ္စည်း (၅) ခု။
(၁) မုန့် (ပေါင်မုန့် ဒါမှမဟုတ် အာလူးကြော်စသဖြင့် မုန့်တွေကတော့ အပြင်သွားရင်အိတ်ထဲမှာမဖြစ်မနေပါတယ်) (၂) ပိုက်ဆံ (၃) ဖုန်း (၄) Lipstick (၅) Earphone။
ကာတွန်းကားတွေကြည့်ရတာရယ် ၊ Game တွေဆော့ပြီး Challenge တွေလုပ်ရတာရယ် တော်တော် ဝါသနာပါတယ် ။
Kare အတွက် ပညာရေးက ဘယ်လောက်အထိအရေးကြီးလဲ။
မိဘတွေကတော့ သားသမီးကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရမ်းအကြီးကြီးတွေဖြစ်စေချင်ကြတာပဲလေ။ Kare ကတော့ သူတို့ဖြစ်စေချင်သလိုတော့မဟုတ်ပေမယ့် Kare တတ်နိုင်သလောက်လေ့လာတယ်။ အိမ်ကလည်း ဘာဖြစ်ရမယ် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးအရမ်းကြီးဖိအားတွေမပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်နှစ်သက်ပြီးသဘောကျပြီးစိတ်ပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်ရယ် ပညာရေးရယ်ကိုမျှလုပ်တယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး အားတဲ့အချိန်လေးသင်တန်းတွေလည်းတက်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းInspire ဖြစ်နေတဲ့ Quote တစ်ခု။
'Be So Good They Can't Ignore You'
နောင်တစ်ချိန်မှာလုပ်ချင်တဲ့ Dream Job။
Pet Spa & Grooming ဆိုင်လေးကို စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ပဲ စေတနာမေတ္တာလေးတွေထားပြီးဖွင့်ချင်တယ်။ Pet Hotel လေးလည်းဖွင့်ပြီးတော့ အရမ်းချစ်ရတဲ့ခွေးလေးတွေ တိရစ္ဆာန်လေးတွေပါမွေး သေချာလေးဂရုစိုက်ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေရယ် သူတို့လေးတွေရယ်နဲ့အတူတူဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းသွားချင်တယ်။
Boyish Style ( တီရှပ်ပုခုံးအကျ ပွပွလေးကိုဝတ်ပြီးJean ဘောင်းဘီရှည်ထဲကို တီရှပ်ထည့်ပြီး ခါးပတ်လေးပတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့Sneaker လေးနဲ့။ အဲ့ဒါက ပုံမှန်အပြင်သွားရင်အမြဲလိုလိုဝတ်ဖြစ်နေကျStyle လေးပဲ )။
ကျန်းမာပြီး Fit ဖြစ်ဖို့ Gym ပုံမှန်ကစားတဲ့ Aria Aung
စက်တင်ဘာလရဲ့ MODA Girl လေး
စက်တင်ဘာမိုးစက်လေးတွေနဲ့ အေးမြတဲ့ ခံစားမှုအောက်မှာ အားကစားလိုက်စားပြီး ဖျတ်လတ်တက်ကြွတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလရဲ့ MODA Girl အဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ အသက်၂၁ သာရှိသေးသလို Body လည်း အရမ်း Fit ဖြစ်တဲ့ Gym Junkie လေး Aria Aung ဖြစ်ပါတယ်။ Street and Retro Sport Vibe လေးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် Street wear brand ဖြစ်တဲ့ INNIT Myanmar ရဲ့ Outfit လေးတွေနဲ့ Cooperate လုပ်ထားပါတယ်။
တစ်နေ့တာရဲ့ Morning Routine မှာ ဘာလုပ်ရတာကို အနှစ်သက်ဆုံးလဲ။
ဘယ်အချိန်ဝတ်ဝတ် Favourite ဖြစ်တဲ့ Style က ဘယ်လို Style တွေဖြစ်မလဲ။
ညီမက လူငယ်ဆန်ဆန် Streetwear လေးတွေ ဝတ်ဖြစ်တာများပါတယ်။
Smoothie လား။ Oat Cookies လား။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျန်းမာပြီး Fit ဖြစ်နေအောင် ဘာတွေလုပ်လဲ။
ညီမ Gym ဆော့တာ ၅နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ခနွာကိုယ်လည်း Fit ဖြစ်ပြီး ကျန်းလည်းကျန်းမာတယ်။
ညီမ ဘဝရဲ့ Role Model က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
အကြိုက်ဆုံး Quote တစ်ခု။
ညီမဘဝမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာက ဘာဖြစ်မလဲ။
အမှတ်တရဖြစ်နေမယ့် Memories ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
ညီမရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ Tattoo ဆင်တူထိုးခဲ့တာ။
Celebrity Crush ကရော ဘယ်သူလဲ။
G- Eazy ပါ။
ရဲရင့်ပြီး Strong ဖြစ်တဲ့ Character ကို သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ Thet Myat Ye Lwin
August မိုးစက်လေးတွေအောက်မှာ လှပနေတဲ့ သူမ..
သဘာဝတရားရဲ့ စစ်မှန်တဲ့အလှတရားတွေကို သစ်တောကြီးထဲမှာ ရှာဖွေရင်း လမ်းပျောက်နေတဲ့ သူလေး Character ကိုပေါ်လွင်နေစေဖို့ ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေး Thet Myat Ye Lwin ကို August လရဲ့ MODA Girl လေးအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ပုံပြင်ထဲကမင်းသမီးလေးလို သစ်တောထဲမှာ ဆော့ကစားရင်း Fairy and Dreamy ဖြစ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ Outfit လေးတွေက အိပ်မက်ဆန်ဆန် ကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားသလို ခံစားရစေမှာပါ။
Q. Disney Princess လေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆို ဘယ်သူဖြစ်ချင်လဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
A. Mulan ဖြစ်ချင်တယ်။ သူ့ရဲ့ရဲရင့်ပြီး Strong ဖြစ်တဲ့ Character ကို သဘောကျတယ်။
Q. ကမ်းခြေကို နှစ်သက်လား။ တောင်တန်းတွေကို နှစ်သက်လား။
A. ကမ်းခြေကို နှစ်သက်တယ်။ Beach Waves လေးတွေကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်။
Q. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်ပန်းလေးနဲ့ ကိုယ်စားပြုချင်လဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
A. နေကြာပန်းလေးနဲ့ ကိုယ်စားပြုချင်တယ်။ အရောင်လေးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး အားလုံးကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လေ။ ပြီးတော့ နေကြာပန်းလေးတွေမြင်လိုက်တိုင်း စိတ်တွေလန်းဆန်းတက်ကြွသွားသလို ခံစားရတယ်။
Q. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
A. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းပါ။ မိခင်တစ်ယောက်ကပေးနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာလည်း ဘယ်အရာနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူး။
Q. Role Model ဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
A. Princess Diana ပါ။ သူမကြုံတွေ့ရတဲ့ Struggle တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော Handle လုပ်တာတွေက ညီမအတွက်တယ် Inspire ဖြစ်စေတယ်။
Q. ကိုယ်ရဲ့ အားသာချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။
A. အားသာချက်ဆိုရင် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြုံကြုံ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရအောင်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးပါ။ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ကျရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရင်လည်း လက်မလျော့ပဲ အဆိုးတွေကနေ သင်ယူတတ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ် Passion ရှိတဲ့ Modelling အလုပ်ကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်သွားချင်ပါတယ်။
#MODA Girl August
#Thet Myat Ye Lwin
ဆယ်ကျော်သက် MODA Girl လေးများရဲ့ GIRLHOOD CAROUSAL
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Personality လေးတွေနဲ့ ခံယူချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
JULY လအတွက် MODA Girl ကိုတော့ Special Edition အနေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ MODA Girl လေးခြောက်ယောက်ကို စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ အသွင်အပြင်လေးတွေ၊ အလှတရားတွေ ကိုယ်စီရှိကြသလို တက်ကြွတဲ့ မိန်းကလေးများရဲ့ ခွန်အားကိုပါပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ အသားအရောင်၊ အရပ်အမောင်း၊ အချိုးအစားတွေတွေကွဲပြားကြပေမယ့် ထက်မြက်ပြီး အရာရာတိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရဲကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ သတ္တိနဲ့ အရည်အချင်းတွေကတော့ တူညီကြပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရားဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Every girl is beautiful in her own way. Be unique and be yourself…
#MODA Girl July
#Kyi Phyu Myat Noe
#Hnin Ei Wai
#Hannah Lu Ing
#Saung Thit Lwin
Pastel ကာလာလေးတွေကြားက Tik Tok Queen လေး Nan Myat Noe Khin
Cute Style လေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်သူလေးပါ
မိုးဖွဲလေးတွေနဲ့ဆွတ်ပျံ့နေတဲ့ အချိန်အခါမှာ June MODA Girl လေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေး Nan Myat Noe Khin ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ IT ကျောင်းသူလေးရဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ချစ်စဖွယ် Personality ကို ပေါ်လွင်အောင် Pastel ဆန်ဆန် အတွဲအဖက်လေးတွေနဲ့ အမြင်ဆန်းအောင် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Q. အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာလုပ်လေ့ရှိလဲ။
A. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တယ်။
Q. ခွေးလေးတွေကို ပိုချစ်လား။ ကြောင်လေးတွေကိုပိုချစ်လား။
A. ခွေးလေးတွေကို ပိုချစ်တယ်။
Q. ဘာလုပ်ရတာကို Passion ရှိလဲ။
A. သီချင်းဆိုရတာကို အရမ်း Passion ဖြစ်တယ်။ ဝါသနာလည်း ပါတယ်။
Q. အကြိုက်ဆုံး Fashion Trend ကဘာဖြစ်မလဲ။
A. မိန်းကလေးအရမ်းမဆန်တဲ့ Free Style ပုံစံလေးတွေ၊ Tees နဲ့ Jeans လေးတွေဝတ်ရတာကြိုက်တယ်။
Q. Morning Person လား။ Night Person လား။
A. Night Person။
Q. Idea Boyfriend Type ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
A. Gentleman ဆန်ဆန်ကောင်လေးတွေ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေကိုပိုကြိုက်တယ်။
#June MODA Girl
#Nan Myat Noe Khin
May MODA Girl လေး May Myat Noe ရဲ့ Urban Hypebeast နေ့လည်ခင်း
Street Fashion လေးတွေကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်…
May လရဲ့ Theme လေးကတော့ Youth Culture ဆိုတဲ့အတိုင်း လူငယ်လေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ ခပ်ပွပွ Baggy Hypebeast ဖက်ရှင်လေးတွေကို MayMyat Noe နဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါ အမိုက်စား Look တွေကိုရရှိစေမှာပါ။
#MODA Girl May
College ကျောင်းသူလေး April May Thu Shein ရဲ့ Freshman နေ့ရက်များ
တက်ကြွတဲ့ Teenager အတွဲအစပ်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ
College ကျောင်းသူလေးရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ငါးရက်တာ School Day Outfit လေးတွေကို APRIL MODA Girl လေး April May Thu Shein က တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ Look လေးတွေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
#MODA Girl April
#April May Thu Shein